Warshadda Shiinaha ee Flake Flake iyo soo-saare | Lingshou
Hordhaca Midabada Flakes
Flakes midab, sidoo kale waxaa caadi ahaan loogu yeeraa sida dillaacyada, jibiska, jajabinta ama xabbado qolofta iwm. Habka waxsoosaarka farsamada ee aadka u sareeya, waxay sameysaa nooc ka mid ah noocyo kala duwan oo hexagonal ah oo ah shey u eg kaas oo loo sameeyo badeecado lagu qurxiyey oo loo isticmaalo balaastigga iyo alaabada caagga ah ee lagu daweeyo marxaladaha kala duwan ee daaweynta iyo daaweynta kiimikada.
Qulqulayaashan qaaska ah waxay bixiyaan iftiin dabiici ah oo dabiici ah iyo isku dhafka midabka quruxda badan waxay si buuxda u muujineysaa saameynta naqshadda dabiiciga ah ee loo yaqaan 'Granite iyo marmar'. Saamaynta muuqaalka ee dabiiciga-dabiiciga ah laguma gaari karo agabyo kale. Markaa jaranjarada midabku waxay gacan ka geysaneysaa in sare loo qaado tayada alaabadaada si ay ugu tartanto suuqaaga.
Codsiga Midabada Flakes
Qulqulka midabka waxaa loo isticmaalay samaynta ABS, AS, HIPS, PP iyo PVC oo leh saameyn lataaban karo iyo marmar iyadoo la adeegsanayo duriin iyo fidin. Qulqulka midabkeena ayaa ka gudbay caddeynta REACH SVHC. Waxay leeyihiin balbalaado ka kooban aashitada & alkali iska caabbinta iyo iska caabinta waxyeellada jirka taasoo gacan ka geysaneysa yareynta isu-imaatinka badeecadaha caagga ah waxayna ka dhigeysaa mid sii waara oo muuqaal leh muuqaal ahaan.
Xiga: Midab Kooban Flake